Bisadda Khao Manee gaar ah | Bisadaha Noti
Bisadda xarrago leh Khao Manee
Bisadda Khao Manee waa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu gaar ah. Waxay leedahay muuqaal aad u macaan oo aad u dhalaalaya isla waqtigaas. Xaqiiqdii, waxaa loo yaqaan 'Diamond Eyes, Royal Siam Cat, iyo White Jewel', maadaama indhihiisu ay dhalaalayaan.
Ma jeclaan lahayd inaad wax dheeraad ah ka ogaato noocyadan quruxda badan? Kadib, ha moogaan tan gaarka ah taas oo aan kaaga warrami doono taariikhdeeda, astaamaheeda, daryeelkeeda iyo wax badan, oo aad u badan.
1 Taariikhda Khao Manee
4 Sideed naftaada u daryeeshaa?
5 Sidee loo tababbaraa bisadda Khao Manee?
Taariikhda Khao Manee
Jilaagayaga timaha asal ahaan wuxuu ka yimid Thailand, halkaas oo boqorkii hore Rama V naftiisa u hibeeyay korintooda. Waa xayawaan soo jiita fiiro badan, sidaa darteed waxay si dhakhso leh u noqotay nooca ugu caansan intii uu xukunka hayay (1868-1910). Waqtigaas ka dib, waxaa loogu yeeri jiray Khao Plort, oo macnaheedu yahay "gebi ahaanba caddaan." Caddaankuna waa mid kamida midabada ugu quruxda badan ee xayawaanku yeelan karo. Si aad u badan oo meesha ay ka soo jeedaan la rumaysan yahay in kuwan dhogorta lihi ay soo jiitaan nasiib wacan iyo farxad.
Si kastaba ha ahaatee, noocani kama uusan tagin Thailand ilaa 1999, markii Mareykankii Colleen Freymouth uu qaatay kii hore oo uu keenay Mareykanka. Sidaa darteed, waa wax aad u yar oo la yaqaan oo ay adag tahay in la helo iib ahaan, markii la helona qiimuhu waa sarreeyaa sida aan gadaal ka arki doonno.
Khao Manee waa bisino Siamese ah oo culeyskeedu yahay inta u dhexeysa 3 iyo 6kg, oo jirkeeda muruqyada ay ku ilaashan yihiin jaakad timo cad oo cad oo gaaban ah. Indhaha, qaybta ugu badan ee isaga ka muuqata, waa midabbo midabbo kala duwan leh: midkood wuxuu noqon doonaa buluug kan kalena cawl ama jaalle. Kuwani waa qaab oval ah. Lugihiisu way kala ballaaran yihiin oo adag yihiin, oo dabaduna way ballaadhan tahay oo salka ayay u dheer tahay.
Sababo hidde ahaan, kuwani badanaa dhashay dhagoole ama qayb dhagoole ah. Laakiin waa in la yiraahdaa dhago la'aanta tijaabooyinka dhawaanahan ayaa sii yaraanaya.
Dhogorta yar waa xayawaan qurux badan. Ku raaxayso la joogida qoyska, ka helitaanka koolkoolin iyaga ka timaadda, oo maxaa diidaya? Dhunkasho. Runtii wuxuu jecelyahay inuu lajiro dadka kale, wuxuuna sifiican ulala dhaqmaa qof walba: caruurta iyo dadka waaweyn. Wuxuu leeyahay dabeecad baxaysa oo firfircoon, taas oo ka dhigaysa isaga saaxiib aad u fiican.
Khao Manee waa guri guri, taas oo macnaheedu yahay inaysan lahayn baahidaas qasabka ah ee dibedda loo aado sida bisadda Bengal ay yeelan karto. Si kastaba ha noqotee, haddii la baray in lala xirto suumanka, hubaal inaad waqti fiican heli doontid.
Sideed naftaada u daryeeshaa?
Ujeedada kaliya ee ah ilaalinta caafimaadka, timaha dhalaalaya iyo ilkaha caafimaadka qaba, Waxaa lagugula talinayaa inaad siiso quudin (qalalan ama qoyan) oo aan lahayn badarka. Beddelka kale waa cuntada Yum ama Barf, laakiin tan dambe waa in lagu sameeyaa talobixinta caafimaadka xoolaha.
Waa bisad in waa inaad cadayato maalin kasta, mar ama laba jeer, kaar tusaale ahaan. Sidoo kale, waqti ka waqti waxaad dooran kartaa inaad gashato burush-gacmo gashi, si aad uga faa'iideysato oo aad u siiso duugis inta aad ka saareyso dhammaan timaha laga yaabo inay dhintaan.
Guud ahaan, waa bisad aad u caafimaad qabta, laakiin ku xisaabtamaysa inay tahay nooc ay ku dhalan karto dhagoole waa muhiim inaad geysid dhakhtarka xoolaha si loogu baaro oo kuu sheegaya sida loo dhaqmo haddii ay tahay.
Sidee loo tababbaraa bisadda Khao Manee?
Khao Manee waa bisad deggan, oo leh dabeecad isu dheellitiran, sidaa darteed, dhib kugu noqon mayso inaad waxbarto. Taas awgeed, waa inaad dulqaadataa, oo wax walba oo ka sarreeya waligaa ha lumin ixtiraamka isaga. Intii uu yaraa, wuu yara adkaan karaa, markaa waa inaad waxyaabo dhawr jeer ku celcelisaa.
Tusaale ahaan, si loo baro inuusan qaniinin, xeelad fudud laakiin wax ku ool ah (in kasta oo ay waqti ku qaadato inuu waxbarto) waa kuwan soo socda:
Haddii aad aragto inuu ku qaniini doono, isla markiiba tus xarig, xayawaan cufan, wax kasta oo uu qaniini karo.
Oo la ciyaar muddo.
Haddii ay mar horeba ku qaniinayeen, gacantaada ama cagahaaga aamus. Marka wuu sii dayn doonaa. Ka dib ka deg sariirta oo iska indha tir ilaa uu ka degaayo.
Dhawaan wuxuu la midoobi doonaa qaniinyada 'waxba ha qaban', wax aan ka farxin doonin isaguna wuxuu isku dayi doonaa inuu si sax ah uga fogaado isagoo aan ku dhaawaceynin.
Haa, Aad ayey muhiim u tahay in markaad la falgalayso isaga aadan sameyn dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah. Noqo mid khiyaano badan. Ha ku qasbin isaga inuu sameeyo wax uusan dooneynin maxaa yeelay haddii kale isagu ma noqon doono bisad faraxsan, waa iska soo horjeed.
Khao Manee waa nooc qaali ah, oo ka mid ah kuwa ugu badan. Sidaa darteed, maahan inay kaa yaabiso in aqal xirfad yaqaan uu ku weydiisto qaar 6000 euros eey yar.
Haddii aad rabto inaad aragto sawirro badan oo ka mid ah xayawaankan quruxda badan, ku raaxayso kuwa aannu hoosta kaaga tagnay:
Sawir - Purrfectcatbreeds.com
Sawir - Pets4homes.co.uk
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda xarrago leh Khao Manee
Adrian mancera dijo
sifiican ayaa loo muujiyey laakiin waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah bisadaha Khao Manee ay leeyihiin midab indho yar oo cagaar ah, laakiin haddii kale si aad u wanaagsan.
Waxaan u maleynayay in daryeelkeeda si aad ah loo muujiyay sidoo kale sawiradu aad bay u fiicnaayeen jidka
Laakiin waxaan rabaa in aan ogaado sida loo ogaado haddii ay aad u daahir tahay, si kale haddii loo dhigo in ay tahay abtirsiin run ah, sidoo kale waxaan u maleeyay in ay lagama maarmaan tahay in la dhigo talooyin xoog leh si loo iibsado bisadaha.
Jawaab Adrian Mancera
Kaar si aad u quudiso bisadaha baadi ah?